Super Transportation: Shirkad Adeegyo Dhanka Safarada Oo Casri Ah Kusoo Kordhisay #Somaliland - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Super Transportation: Shirkad Adeegyo Dhanka Safarada Oo Casri Ah Kusoo Kordhisay #Somaliland
Hargeysa(ANN)-Shirkad dhinaca socdaalka ah oo magaceedu yahay Super Transportation and Logistics, ayaa lagaga dhawaaqay Magaaladda Hargeysa, taas oo nidaam casri ah ku soo kordhisay Adeegyada ay bixinay ee dhanka Socdaalka iyo qaadista Alaabooyinka.
Shirkadda, ayaa isaga gooshay gobollada Somaliland iyo kuwa deriska ah ee Somalia, Djibouti iyo Ethiopia, waxaana Munaasibadda daah-furka Shirkadda oo si meeqaam sare leh loo soo agaasimay lagu qabtay Hargeysa, iyadoo ay ka qaybgaleen Maamulka sare ee shirkadda, Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda, Xildhibaanno, madax-dhaqameed, ganacsato iyo Marti-sharaf kale.
“ShirkaddaSUPER Transportation waxay kaga duwan tahay Shirkaddaha kale, waxay ku shaqeynaysaa hab Online ah, markaa isaga oo gurigiisa joogaa ayaa waxa uu Booking-gareysanayaa Tigidhka uu ku baxayo, iyo weliba alaabta uu dirayo iyo adeegyo kale oo tirro baddan, isaga oo qofku la soconayo kolba halka ay mareyso alaabtiisu”. Ayuu yidhi Maxamuud Aw Ciise Jaamac.
“Inaan ka soo qeybgalo daah-furka Shirkadda SUPER aad ayaan ugu faraxsanay, tartanka ganacsiguna wuxuu abuurayaa inuu dadweynaha reer Somaliland u fududeeyo waxyaabo baddan. Shirkadda hore oo adeeg-ga bulshada ayaa jiray, laakin Shirkadda SUPER waxay kaga duwan tahay adiga oo Xaafaddada jooga inaad ka dalbanayso tigidhkaaga oo aan wakhtiga kaa dhacayn, taasina waxay ina tusinaysaa halka uu maanta dalku ka gaadhay tignoolajiyada”.Ayuu yidhi Agaasime Cabdiraxmaan.
Sidoo kale, Sarkaal sare oo ka socday Shirkada Caymiska ee Amaano Insurance Liibaan Maxamed Ciise oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi “Waxaan bogaadinayaa Maamulka iyo Mulkiilayaasha Shirkadda SUPER Transportation &Logistics maalgashigan baaxada leh ee ay dalka ku soo kordhiyeen oo dhaqaalaha waddanka wax baddan ku soo kordhin doonaa”.
Mujaahid Aadan-Ruush oo ka tirsanaa Ururkii SNM isaguna munaasibadda ka hadlay, ayaa saamilleyda shirkadda iyo maamulkeeda-ba ku boorriyey inay ka fogaadaan wax kasta oo khilaaf ku keeni kara shaqada shikadda. waxa uu Mujaahidku ganacsatada dalka kula taliyey inaanay Jawaanno bariis ah dibadda ka soo waaridin,balse ay dalkooda maal-gashadaan oo wershedo ka hir-geliyaan dalka.
Shirkadda Super Transport and Logistics oo xafiisyo ku leh gobollada Dalka iyo dalalka Deriska, ah ayaa sida maamulka shirkaddu sheegay, adeeggoodu kaga duwan yahay shirkadaha hore uga jiray dalka inay ku shaqaynayso Hab Online ah oo macaamiishu ku dalbanayaan tigidhooda. Waxa kale oo shikaddu hirgelisay nidaamka la socodka ee GPRS oo lagu soconayo laguna kaantaroolayo xawaaraha Gaadiidka si loo sugo bad-qabka dadka iyo Gaadiidka. Habkan ayaa sidoo kale fududaynaya inay dadku si toos ah ula socdaan Alaabooyinka ay u dirayaan gobollada dalka.